Anton / Bauer သည် 2015 IBC Show တွင် CINE ဘက်ထရီအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Anton / Bauer ဟာ 2015 IBC Show မှာနယူး Cine ဘက်ထရီစီးရီးကြေညာ
Anton / Bauer ဟာ 2015 IBC Show မှာနယူး Cine ဘက်ထရီစီးရီးကြေညာ
IBC 2015, E55 ရပ်ခန်းမ 11
Shelton, မှန် CT (သြဂုတ်လ 31, 2015) - Anton / Bauer တစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဘက်ထရီဝန်ကြီးချုပ်ပံ့ပိုးပေးနှင့်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နည်းပညာများအားသွင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများ၎င်း၏အသစ်အ Cine ဘက်ထရီစီးရီးကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါ Cine ဘက်ထရီစီးရီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရိုက်ကူးရေးများအတွက်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အများဆုံးအကြမ်းခံမိုဘိုင်းပါဝါဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ Cine စီးရီးစဉ်ဆက်မပြတ်အာဏာ 12 AMPS ကယ်တင်နှင့်ဖျူး Link ကိုနည်းပညာ, အရာထည့်သွင်း - တစ်ဆဲလ် Anomaly ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် - ကပ်ဘေးဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတားဆီး, ဘက်ထရီဆဲလ်ပတျဝနျးကငျြမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ ဘက်ထရီလိုင်းလည်းပုံမှန်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းအကောင်းဆုံးဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်သေချာ, အပူချိန်နှင့် Over-လက်ရှိပြည်နယ်များ detect လုပ်ဖို့မျိုးစုံအာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်။
ကင်မရာ stabilizer စနစ်များနှင့်ရထားလမ်း-တပ်ဆင်ထားကင်မရာများများအတွက်စံပြ, အ Cine ဘက်ထရီရဲ့အကြမ်းခံ, စက်မှုဒီဇိုင်းနှင့်ခြေရာကိုအားလုံးတည်ဆဲ Anton / Bauer အားသွင်းအပေါ် Cine-စတိုင်ထိုကဲ့သို့သော ARRI Alexa Mini နဲ့အနီရောင်လက်နက်အဖြစ်ကင်မရာများ, နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ compliments ။ အဆုံးစွန်အဆင်ပြေဘို့, Cine ဘက်ထရီစီးရီးတွေဖြစ်တဲ့မော်နီတာ, အလင်းအိမ်, ကြိုးမဲ့အသံဖမ်းနှင့်အခြားမည်သည့် 14V ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်အရန်ပစ္စည်းများပါဝါတစ်ခုPowerTap®ပါဝင်သည်။
"ဒီ Cine ဘက်ထရီစီးရီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရိုက်ကူးရေးများအတွက်ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံး, ထူးချွန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပါဝါစနစ်များကိုထုတ်လုပ်မှ Anton / Bauer ရဲ့အပျနှံအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်," Neal Laneville, Anton / Bauer များအတွက်ကုန်ပစ္စည်း Manager ကိုကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်တာနှင့်အသစ်သော Cine စီးရီး၏ဒီဇိုင်းထဲသို့ပေါင်းစပ်အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ အဆိုပါရလဒ်ပဲရိုက်ကူးရေးအဘို့တည်လုံးဝဒီဇိုင်းကိုယ်ထည်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနည်းပညာများပေါင်းစပ်တဲ့ဘက်ထရီစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံးတောင်းဆိုမှုများပညာရှင်များများအတွက် bespoke ဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ "
အဆိုပါ Cine စီးရီးကိုလည်းနာရီနှင့်မိနစ် Run-အချိန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုအလွန်တိကျမှန်ကန် LCD ကိုပါဝင်သည်။ ဘက်ထရီ detach လုပ်လိုက်သောအခါ, ထို LCD မျက်နှာပြင်အသုံးပြုသူမစိုက်အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြု, စွမ်းရည်၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဘက်ထရီသက်တမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။
စက်တင်ဘာလ 2015 အတွက်လာမယ့်, အ Cine စီးရီးနှစ်ခုလုံးကိုရွှေတောင်ပေါ်မှာနဲ့ V-တောင်ပေါ်မှာ connectors အတွက် 90 Wh နှင့် 150 Wh အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးက 190 Wh option ကို 2016 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Cine ဘက်ထရီစီးရီးအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.antonbauer.com သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ + 1 (800) 422-3473.
ဘက်ထရီ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ကင်မရာ Cine isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မိုဘိုင်းပါဝါ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-31
ယခင်: Cinegy @IBC2015!
နောက်တစ်ခု: ENCO ရေဒီယိုအဘို့ဗီဒီယို IBC2015 မှာတိုးတက်လာသရုပ်ပြရန်